Ikwesiri ileba anya maka otutu ihuenyo? | Martech Zone
Ikwesiri ileba anya maka otutu ihuenyo?
Wenezdee, Jenụwarị 30, 2013 Bọchị Sọnde, Machị 24, 2013 Douglas Karr
Ọ ga-amasị m onye ọkachamara ahụmịhe ọrụ ka ọ banye na post a. Anọ m na-ele anya ka ọtụtụ ebe nrụọrụ teknụzụ na-ejikarị elele anya (mpaghara a na-ahụ anya nke ngwaọrụ gị) na enweghị m mmasị na ya. Ekwetaghị m nke ahụ, ọ bụrụ na ị nwere mkpebi ọzọ ị ga-eji mkpebi ahụ.
Nke a bụ mmebi nke mkpebi kacha elu na Martech Zone:
Mkpebi kachasị ewu ewu, dịka ị pụrụ ịhụ, bụ 1366 × 768. Nke a mara ezigbo mma laptọọpụ ọkọlọtọ na ahịa ugbu a. N'ihe ruru, nke a bụ etu ihuenyo ahụ si dị:
Dị ka ị pụrụ ịhụ na ihuenyo bụ nnọọ, nnọọ obosara na a bit mkpụmkpụ. Ọ bụ ezie na ọ na - eme ka ihu igwe dị mma iji lelee vidiyo HD, ọ bụghị ezigbo ihuenyo nke kachasị maka weebụsaịtị yana ịgụ. Anyị na-elekwa vidio n’ebe dị anya… adịghị nso n’ebe anyị na-agụ ederede ma na-ede na keyboard. Igwe ihuenyo ga-abụ mkpebi ka mma maka nke ahụ, ebe ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ na-adịgasị iche karịa ogologo karịa ka ha dị na obosara.
Yabụ, ana m ahụ mwakpo weebụsaịtị nke emebere iji bulie echiche nleta ma anaghị ere m. Akwụkwọ akụkọ dị iche iche chọtara ogologo oge gara aga na ndị mmadụ na-agụ na ibe kwụ ọtọ, ọ bụghị nke dị ogologo. Anyị lekwasịrị anya na-efu ka anyị na-agafe ihuenyo. Ga ihe dị n'akụkụ aka ekpe, ma ọ bụ aka nri na-eme ka ha ghara ilekwasị anya ka m na-agụ ọdịnaya, ya mere, a na-eleghara ihe ndị ọzọ dị ka sidebars anya kpamkpam.
Na nke ahụ, anaghị m atụgharị anya Martech Zone ihuenyo iji weghara ala ahụ dịpụrụ adịpụ n'oge ọ bụla. Nzube anyị na ileba anya dị iche na ahụmịhe na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba ma anyị ga-anọgide na-eme ka ahụmahụ ndị ahụ bụrụ ihe pụrụ iche. Obosara anyị na blog dị mma maka ịgụ elu ruo ala ma hụ sidebar ka anyị na-ele isi ọdịnaya. Ihe omuma anyi bu 640px buru ibu iji kwado onodu vidiyo di omimi na sidebar nke 300px sara mbara maka mgbasa ozi.
Kedu ihe ị chere? Anyị kwesịrị ịga ụzọ nke saịtị ndị ọzọ? Ma ọ bụ ka m nọ n'ụzọ ziri ezi na nhazi anyị ugbu a?
Tags: 1024X7681366X768designHD nyochaannukwu ileba anyamonitornyochaa mmezinyochaa nhamkpebiTechnleleobosara ileba anya
Ihe Mere Ngwa Ngwa Mobile Dị Iche
Jenụwarị 31, 2013 na 7:39 PM
Enweghị m ike ịsị na abụ m onye ọrụ ahụmịhe ọrụ, agbanyeghị m na-ewu saịtị kemgbe ogologo oge, m na-agbanye onye ọ bụla ike maka opekata mpe mmeghachi omume, ọ bụrụ naanị ilekọta nsogbu ị na-enwe na-eche ihu.
Ọ bụrụ n'ịlele saịtị dịka Mashable, Verge, na ọbụlagodi NPR, ị nwere ike ịgwa ha na ha agbanweela n'ụdị dị ukwuu dịka ị kwuru nke m hụrụ n'anya, ka m na-arụ ọrụ ma gụọ ọtụtụ ọdịnaya metụtara ọrụ m ihuenyo 32 ″.
Agbanyeghị, n'uche m ma a bịa na saịtị dịka nke gị, aga m eche ihe etinyere n'àjà na ụdị mmefu ego ị ga-atụgharị.
Onye nrụpụta n'ime m ga-atụ aro ịnwale ya na ụfọdụ atụmatụ sara mbara na ọdịnaya a kapịrị ọnụ, yana iji redirect maka nlere anya akọwapụtara, wee si ebe ahụ pụọ.
Achọpụtara m na saịtị ndị dị ka Verge na Mashable, ezigbo akụkụ chọrọ ezigbo ọnụ ụlọ, na atụmatụ sara mbara na-enyere aka na nke ahụ.
Jenụwarị 31, 2013 na 9:46 PM
Daalụ maka oke nghọta a, Doug! Anyị ga-etinye ego ma ọ bụrụ na enwere ihe akaebe na ụdị, usoro na-anabata ihe na-emeziwanye ịgụ na njikọ na saịtị. Enwere ihe akaebe doro anya nke a?